Ubuntu Error and Compiz help | TechSectors
ကိုဦးရေ - Linux က စသုံးစမှာ ခုလိုပဲ Error အနဲနဲ့ အများ ရှိတတ်ပါတယ် - ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီလောက်ထိ ခရီးရောက်လာပြီ ဆိုတာကိုက ဝမ်းသာစရာပါ - စိတ်မပျက်ပါနဲ့ ဆက်ပြီးလေ့လာလိုက်ပါ - တကယ်တမ်း သုံးသပ်ကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို့တွေက ဝင်းဒိုးကို နေ့စဉ်ရက်ဆက် သုံးလာလို့သာ သုံးရတာ လွယ်တယ်ဆိုပြီး စိတ်ထဲမှာ ထင်နေတာပါ - သေသေချာချာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပြူတာ မသုံးတတ်သေးခင် Windows ကိုစတင်ထိတွေ့တုန်းကလည်း ခုလိုပဲ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ ကြတာချည်းပါပဲ - ဘယ်လောက်ပဲ ခက်ခဲတယ်ပြောပြော ကိုဦး ခုဆိုရင် Linux ကို ၃ ၊ ၄ ရက်အတွင်း တော်တော်လေး တီးမိခေါက်မိတော့ ရှိပြီပေါ့ - ဒီလိုပါပဲ - သုံးတာကြာလာတာနဲ့ အမျှ ပိုပြီး သုံးတတ်လာမှာပါ - ခု တက်နေတဲ့ Error တွေဆိုတာလည်း နောက်တစ်ကြိမ် Reinstall ပြန်လုပ်ပြီး သုံးတဲ့ အချိန်ကျ အံ့သြဖို့ ကောင်းလောက်အောင် တော်တော်ကြီး နည်းသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ အနည်းအကျဉ်း သုံးတတ်သွားပြီး ဘာပြီးရင် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ နားလည်သွားပြီကိုး - အဓိကက OS တစ်ခုကို လူတစ်ယောက်က ဘယ်လောက်ထိ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် နားလည် အသုံးပြုနိုင်လဲ ဆိုတာ အဲ့ဒီ့သူရဲ့ ကွန်ပြူတာ သုံးလာတဲ့ သက်တမ်း ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ ဆိုတာပေါ် မမှီခိုပါဘူး - အဲဒီ့သူရဲ့ စာဖတ်နိုင်စွမ်း - စာတွေ့နဲ့လက်တွေ့ပေါင်းစပ်နိုင်စွမ်း နဲ့Concepts တွေကို နားလည်သဘောပေါက်မှု ဆိုတာပေါ်ပဲ မူတည်ပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း လေရှည်နေတာ - ခု ကိုဦး ဖြစ်နေတဲ့ အခက်အခဲလေး စပြီးဆွေးနွေးကြည့်ပါ့မယ် - ကိုဦး ပြထားတဲ့ပုံတွေထဲက ကျန်တဲ့ပုံတွေ ခဏထားပြီး ပထမဆုံးပုံကို ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်တော့ Sofware index is broken. ဆိုပြီး ကျွန်တော်တွေ့ရတယ် - ဒီပြဿနာကို ကျွန်တော် သုံးခါစကလည်း ဖြစ်ဖူးတယ် - များသောအားဖြင့် ဘယ်လို အခြေအနေမှာ ဖြစ်လည်း ဆိုတော့ etc/apt/sources.list ထဲမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဖော်ပြချက်တစ်ချို့ လွဲမှားနေတာ - ဒါမှမဟုတ်ရင် packages တစ်ခုခုကို install လုပ်ရင်းနဲ့ install ဆက်လုပ်လို့ မရပဲ Error တက်သွားတာမျိုး - ( ဥပမာ Windows မှာဆို Software install လုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့ လမ်းတစ်ဝက်မှာ ရပ်သွားပြီး ဆက် install လုပ်မရတာမျိုး ) စသဖြင့် ဖြစ်တဲ့ အခါ Synaptic Package Manager မှာ Packages တွေ Broken ဖြစ်သွားပြီး ဒီပြဿနာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ sources.list ထဲထိ လိုက်ပြင်ဖို့ကျ နဲနဲ လမ်းကြောင်းရှည်ပါတယ် - ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ သူ့ထဲမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ စာကြောင်းတွေကို အသေးစိတ် ပြန်ကြည့်ရမယ် - ဘာတွေ လွဲမှားနေလဲ ရှာရမယ် - တွေ့ပြီ ဆိုရင် တစ်ခြား မှန်ကန်တဲ့ စာလုံးတွေနဲ့ အစားထိုး ပြင်ဆင်ရမယ် - အဲလို လုပ်တဲ့ အခါမှာ စာလုံးတွေက Case sensitive ရှိတယ် - စာလုံးအသေးအကြီးက အစ အလွဲအမှားမခံဘူး - Spacebar တစ်ချက်ခြားတာနဲ့ မခြားတာနဲ့တောင် အလုပ်လုပ်တယ် မလုပ်ဘူးဆိုတာတွေပါရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် sources.list ထဲကို စစ်ဆေးဖို့ ကိစ္စကို ခဏဘေးထားပြီး နောက်ထပ်လွယ်ကူမယ့် နည်းကို အကြံပေးကြည့်ပါ့မယ်။ အရင်ဆုံး Terminal ထဲကို သွားလိုက်ပါ။ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ command တွေကို တစ်ခုချင်းစီ copy > paste လုပ်ပြီး enter ခေါက်ပါ။ လက်နဲ့ရိုက်ချင်လည်း ရိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာလုံးတွေ မလွဲပါစေနဲ့ -
ကိုဦးရဲ့ စက်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ problem တွေကို fix လုပ်နိုင်ဖို့ အတွက် အရင်ဆုံး ဒီ command ကို သုံးကြည့်ပါ -
Partial packages တွေကို clean ဖို့အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ command ကို သုံးပါ -
apt cache တွေကို clean ဖို့အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ command ကို သုံးပါ -
မလိုအပ်တဲ့ dependencies တွေကို clean ဖို့အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ command ကို သုံးပါ -
တကယ်လို့ အဲလို remove လုပ်နေစဉ် အတွင်းမှာ broken package ကို တိတိကျကျ တွေ့ခဲ့ပြီ ဆိုရင် အဲ့ဒီ့ package ကို ဒီအောက်က command နဲ့ force ပေးပြီး Remove လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဖော်ပြထားတဲ့ package name နေရာမှာ Terminal ထဲမှာ ကိုယ်တွေ့ရတဲ့ error ဖြစ်နေတဲ့ package name ကို အစားထိုး ထည့်သွင်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးသွားရင် အောက်က command ကို သုံးပြီး package list တွေကို update ပေးကြည့်ပါ။
ပြီးသွားရင် Applcations > Ubuntu Software Center ကနေ နှစ်သက်ရာ software တစ်ခုခုကို install လုပ်ကြည့်ပါဦး -
အဲ့ဒီ့နည်းနဲ့မှ အဆင်မပြေရင် ဒီနေရာကို ကလစ်ပေးပြီး Google ထဲမှာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိမယ့် အဖြေကို ထပ်ရှာကြည့်ပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ system ကို up to date ဖြစ်အောင် ထားဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့ - အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင်နည်းကတော့ System > Administration > Update Manager ကို သွားပြီး check ကို နှိပ်ပါ - Check လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ သူ list တြွေပလာတယ်ဆိုရင်
Install Updates ကို ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
နောက်ထပ် ကိုဦး သိချင်တဲ့ ဒီအောက်က ပုံစံတွေအတိုင်း ဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့က
software တစ်ခု install လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ သူ့နာမည်က compizconfig-settings-manager ပါ။ ပုံမှန်အတိုင်း Applcations > Ubuntu Software Center ကနေ search box ကနေပြီး ccsm လို့ ရိုက်ရှာပြီး install လုပ်ဆောင်နိုင်သလို -
Terminal ထဲကနေ သွားပြီး အောက်ဖော်ပြပါ command တွေနဲ့ install လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုဦးစက်က လောလောဆယ်မှာ Terminal ထဲကရော Ubuntu Software Center ကနေပပါ install လုပ်လို့ မရဘူးလို့ ပြောထားတော့ နောက်ထပ် လုပ်ဆောင်နည်း တစ်နည်း ရှိပါသေးတယ်။ အဲတာကတော့ Online နဲ့ တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက်ပြီး install လုပ်ဆောင်နေရတဲ့ software packages တွေကို အောက်ဖော်ပြပါ နေရာကနေလည်း သီးခြားစီ download ချပြီး install လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုဦး အဲ့နေရာကို သွားရင် သူ့စာမျက်နှာက အုပ်စုလိုက် အများကြီး ခွဲထားတော့ တွေ့ရတော့ ဘယ်နေရာမှာ compizconfig-settings-manager ရှိလဲဆိုတာ ရှာမတွေ့ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နေရာအသေးစိတ် ထပ်ပြီး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
နေရာတွေ့ပေမယ့် Download ချဖို့ နေရာပျောက်နေနိုင်ပါသေးတယ်။ အဲတာဆိုရင် ဒီအောက်က link ကို နှိပ်ပါ။
compizconfig-settings-manager ကို ဒီ software တစ်ခုတည်း install လုပ်မှ အသုံးချလို့ ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ Ubuntu Control Center ကို install လုပ်ဆောင်လိုက်ရင်လည်း compizconfig-settings-manager က အလိုလို install လုပ်ဆောင်ပြီးသား အနေနဲ့ ပါဝင်လာပါတယ်။ ဒီအောက်က ပုံကို ကြည့်ကြည့်ပါ။
Ubuntu Control Center ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတော့ Ubuntu တစ်ခုလုံးကို တစ်နေရာတည်းက ချုပ်ထိန်း ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ နေရာပါပဲ။ Windows မှာဆို Control panel နဲ့ သဘောတရားချင်း ဆင်တူတဲ့ နေရာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို Download ရယူဖို့ အတွက်ကတော့ ဒီအောက်က နေရာကနေ သွားပါ။
Download Ubuntu Control Center!!
Ubuntu Control Center ကို install လုပ်ဆောင်ဖို့ အတွက် packages နောက်ထပ် ၂ ခု install လုပ်ဆောင်ပြီးသား ဖြစ်ဖို့ လိုပါသေးတယ်။ အဲတာတွေက Font-manager နဲ့ jstest-gtk ဆိုတာပါ။ ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ပေးထားတဲ့ link မှာပဲ ဖော်ပြပါ packages နှစ်ခုလုံး ရှိပါတယ်။ i386 နဲ့ amd64 ဆိုတာတွေ တွေ့ရင် ဘာရွေးရမှန်း မသိဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။ amd64 ဆိုတာ AMD processor အတွက် ဖြစ်ပြီး i386 ဆိုတာ intel processor သုံးသူများအတွက်ပါ။ ကိုဦးစက်မှာ ရှိတဲ့ processor အမျိုးအစားကို လိုက်ပြီး Download ချရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ကိုဦး လိုချင်နေတဲ့ impressive effects တွေပါတဲ့ compizconfig-settings-manager စက်ထဲ ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ သူ့ကို install လုပ်ဆောင်တာကတော့ ပုံမှန်အတိုင်း packages တွေကို double click ပေးလိုက်ရင် ပြီးပေမယ့် - သူ့ကို အသုံးချဖို့ အတွက်ဆိုရင် သိထားရမှာလေးတွေ ရှိပါသေးတယ်။
ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရရင် Graphic driver ကို compizconfig-settings-manager နဲ့ သုံးလို့ ရအောင် activate လုပ်ပေးဖို့တွေ - အသုံးပြုဖို့ shortcuts တွေ နားလည်ထားဖို့ ဆိုတာတွေ လိုပါသေးတယ်။
ဒါကို သီးခြား ပို့စ် တစ်ခု အနေနဲ့ ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။
Ubuntu Control Center ကို သပ်သပ်ကြီး install မလုပ်ပဲ ခေါ်သုံးတဲ့ နည်းလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အဲတာကတော့ System > Preferences > Main menu > System ကနေ သွားပြီး အောက်က ပုံမှာ မြင်ရတဲ့ အတိုင်း ညာဘက် check-box မှာ အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ။
Ubuntu Control Center လိုပဲ နောက်ထပ် အသုံးတည့်တဲ့ ( Ubuntu သုံးသူတိုင်း အမြဲ သုံးသင့်တဲ့ ) Application တစ်ခု ရှိပါသေးတယ်။ သူ့နာမည်က Ubuntu Tweak ပါ။ သူ့ကို ဒီအောက်က Link ကနေ သွားရောက် ရယူနိုင်ပါတယ်။
Download Ubuntu Tweak!!
လောလောဆယ်တော့ ဒီလောက်ပါပဲ - ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း compizconfig-settings-manager အသုံးပြုနည်း အကြောင်း ကျွန်တော် ရေးပေးသွားပါ့မယ်။
အဆင်ပြေပါစေ ကိုဦး -